Iza no fahavaloko? - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2016-01 mpandimby ny Magazine > Iza no fahavaloko?
Tsy hohadinoiko mihitsy io andro nampalahelo tao Durban, Afrika Atsimo io. 13 taona aho ary nilalao tag teo an-tokotany aloha niaraka tamin'ireo anadahiko sy rahavaviko ary namako tamin'ny andro mahafinaritra mahafinaritra talaky masoandro rehefa niantso ny fianakaviany tao ny reniko. Latsaka ny ranomasony raha nitana lahatsoratra an-gazety izy izay nitatitra ny fahafatesan'ny raiko tany Afrika Atsinanana.
Ny toe-javatra manodidina ny fahafatesany dia nametraka fanontaniana vitsivitsy. Na izany aza, ny zava-drehetra dia toa nanondro fa niharan'ny ady Mao Mao izy, izay nanomboka tamin'ny 1952 ka hatramin'ny 1960 ary dia notarihina hanohitra ny fanjanahan'i Kenya. Ny vondrona mavitrika indrindra amin'ny ady mitam-piadiana dia avy amin'ny Kikuyu, foko lehibe indrindra any Kenya. Na dia natao hanoherana ny fahefan'ny mpanjanatany britanika sy ny fotsy hoditra aza ny fifandonana, dia nisy ihany koa fifandonana mahery vaika teo amin'i Mao Mao sy ireo Afrikana tsy mivadika. Ny raiko dia lehibe tao amin'ny rezimanta Kenyan tamin'izany fotoana izany ary nitana andraikitra lehibe tamin'ny ady ary noho izany dia tafiditra tao anatin'ny lisitra malaza izy. Tena kivy be aho, very hevitra ary sosotra be tamin'ny fahatanorako. Ny hany zavatra fantatro dia ny famoizana ny raiko malalako. Fotoana fohy taorian'ny nifaranan'ny ady. Nikasa ny hifindra any Afrika Atsimo miaraka amintsika izy tao anatin'ny volana vitsivitsy. Tamin'izany fotoana izany dia tsy azoko ny tena anton'ny ady ary fantatro fotsiny fa ny dadako dia miady amin'ny fikambanana mpampihorohoro. Izy no fahavalo nahatonga ny namantsika namoy ny ainy!
Tsy vitan'ny niatrika ny fahaverezan'ny fahavoazana fotsiny izahay, fa niatrika ny fahantrana koa izahay satria tsy nety nanome anay ny sandan'ny fanananay tany Afrika Atsinanana ny tompon'andraikitra amin'ny fanjakana. Niatrika fanamby ny reniko avy eo nitady asa sy mitaiza zaza dimy mianatra any amin'ny kely karama. Na izany aza, tao anatin'ireo taona taorian'izay, dia nijanona ho mahatoky amin'ny fivavahako kristiana aho ary tsy nampisy hatezerana na fankahalana an'ireo olona tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesan'ny raiko nahatsiravina.
Tsy misy fomba hafa
Ireo teny nolazain'i Jesosy raha mbola nihantona teo amin'ny hazo fijaliana Izy, nijery ireo olona nanameloka, naneso, nikapoka, nanombo tamin'ny hazo fijaliana ary nijery azy maty tamim-pahoriana, nampionona ahy tamin'ny fahoriako: «Raiko ô, mamelà ny heloko satria tsy fantany izay ataony. "
Ny fanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana dia nateraky ny mpitondra fivavahana marina tamin'ny androny, ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo, feno politika, fahefana ary fahafaham-po amin'ny tontolon'izy ireo. Nihalehibe teto amin'ity tontolo ity izy ireo ary miorim-paka lalina amin'ny psyche azy manokana sy ireo fomba amam-panao tamin'ny androny. Ny hafatra izay notorin'i Jesosy dia miteraka fandrahonana lehibe amin'ny fisian'izao tontolo izao, ka namorona tetika hitondrana azy eo amin'ny fitsarana sy hanomboana azy amin'ny hazo fijaliana izy Diso tanteraka ny fanaovana izany, saingy tsy nahita fomba hafa izy ireo.
Ny miaramila romana dia ampahany amin'ny tontolo hafa, ampahany amin'ny fanjakana imperialisma. Nanaraka ny baiko avy amin'ny lehibeny fotsiny izy ireo toa izay nataon'ny miaramila tsy mivadika rehetra. Tsy nahita lalan-kafa izy ireo.
Izaho koa dia tsy maintsy niatrika ny marina: ireo mpikomy Mao Mao dia tratry ny ady ratsy izay momba ny fahavelomana. Voasimba ny fahafahanao manokana. Nihalehibe izy ireo ary nino ny anton'izy ireo ary nifidy ny làlan'ny herisetra hiantohana ny fahalalahana. Tsy nahita lalan-kafa izy ireo. Taona maro taty aoriana, tamin'ny 1997, dia nasaina ho mpandahateny amin'ny fivoriana iray tany akaikin'i Kibirichia any amin'ny faritra atsinanan'ny Meru any Kenya aho. Fotoana nahafinaritra iray hitrandrahana ny fakako ary hanehoako amin'ny vadiko sy ny zanako ny toetra mampientanentana an'i Kenya ary tena faly tamin'izy ireo izy ireo.
Nandritra ny lahateniko voalohany dia niresaka momba ny fahazazako nankafiziko teto amin'ity firenena tsara tarehy ity aho, saingy tsy nitantara ny lafiny maizina amin'ny ady sy ny fahafatesan'ny raiko. Fotoana fohy taorian'ny fisehoako dia nisy lehilahy antitra volo fotsy tonga tao amiko, nandeha tamin'ny sakantsakana ary nitsiky be ny tarehiny. Voahodidin'ny vondrona mafana fo iray momba ny zafikely valo eo ho eo izy dia nangataka ahy hipetraka satria te hilaza zavatra amiko izy.
Fotoana nampihetsi-po narahin'ny fahagaga tsy nampoizina. Niresaka tamim-pahatsorana momba ny ady sy ny fomba niadiany tamin'ny ady izy tamin'ny naha-mpikambana tao amin'ny Kikuju. Naheno momba ny lafiny hafa amin'ny fifandonana aho. Nilaza izy fa anisan'ny hetsika te-hiaina malalaka sy hiasa amin'ireo tany nalaina tamin'izy ireo. Mampalahelo fa very izy sy ireo olon-tiany an'arivony maro hafa, anisan'izany ny vehivavy sy ny ankizy. Avy eo dia nibanjina ahy tamim-pitiavana feno fitiavana ity tovolahy kristiana tia fo ity ary nilaza hoe: "Miala tsiny indrindra amin'ny fahafatesan'ny rainao aho." Sarotra tamiko ny nitana ny ranomasoko. Eto izahay dia niresaka toy ny Kristiana taompolo vitsivitsy taty aoriana, rehefa avy nifanandrina tamin'ny iray tamin'ireo ady lozabe indrindra tany Kenya, na dia zaza tsy ampy taona fotsiny aza aho nandritra ny fotoana nisian'ny fifandonana.
Nifandray avy hatrany tao anatin’ny fisakaizana lalina izahay. Na dia mbola tsy nitondra ny olona tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesan'ny raiko tamin'ny fangidiana mihitsy aza aho, dia nahatsapa fampihavanana lalina tamin'ny tantara aho. Filipianina 4,7 Dia tonga tao an-tsaiko hoe: “Ary ny fiadanan’Andriamanitra, izay ambony noho ny fahalalana rehetra, dia tehirizo ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin’i Kristy Jesosy”. Ny fitiavana sy ny fiadanana ary ny fahasoavan’Andriamanitra no nampiray antsika ho iray eo anatrehany. Ny fakantsika tao amin’i Kristy no nanasitrana antsika, nanapaka ny tsingerin’ny fanaintainana izay nandaniantsika ny ankamaroan’ny fiainantsika. Nanenika anay ny fahatsapana fanamaivanana sy fanafahana tsy hay lazaina. Ny fomba nampiraisan’Andriamanitra antsika dia maneho ny maha zava-poana ny ady, ny fifandirana ary ny fifandrafiana. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia tsy nisy nandresy tokoa ny andaniny sy ny ankilany. Mahavaky fo ny mahita ny Kristianina miady amin’ny Kristianina amin’ny anaran’izy ireo. Amin’ny fotoanan’ny ady dia samy mivavaka amin’Andriamanitra ny andaniny sy ny ankilany ary mangataka Aminy mba hijoro eo anilany, ary amin’ny fotoan’ny fandriam-pahalemana dia ireo Kristiana iray ihany no tena mpinamana.
Io fihaonana nanova fiainana io dia nanampy ahy hahatakatra bebe kokoa ireo andinin-teny ao amin’ny Baiboly miresaka momba ny fahavalo be fitiavana 6,27-36). Ankoatra ny ady dia mitaky ny fanontaniana hoe iza no fahavalontsika sy fahavalontsika? Ahoana ny amin’ireo olona hitantsika isan’andro? Mahatonga fankahalana sy fankahalana ny hafa ve isika? Mety hanohitra ny lehibe, izay tsy mifankahazo? Angamba manohitra ilay namana azo itokisana izay nandratra antsika lalina? Mety hanohitra ny mpifanolobodirindrina izay iadianay?
Tsy mandrara ny fitondran-tena ratsy ny andinin-teny avy ao amin’ny Lioka. Raha ny tokony ho izy, dia ny fitazonana ny sary lehibe amin'ny alalan'ny fampiharana ny famelan-keloka, ny fahasoavana, ny hatsaram-panahy ary ny fampihavanana ary ny fahatongavana ho ilay olona niantsoan'i Kristy antsika. Izany dia momba ny fianarana ho tia tahaka ny nitiavan’Andriamanitra rehefa mihalehibe sy mitombo amin’ny maha-Kristianina antsika. Ny lonilony sy ny fandavana dia mora mitondra antsika ho babo sy hifehy. Ny fianarana mamela amin’ny alalan’ny fametrahana eo am-pelatanan’Andriamanitra ny toe-javatra tsy azontsika fehezina sy ny fitaomana dia mitondra ny tena fiovana. Ao amin'i Johannes 8,31-32 Mampirisika antsika i Jesosy mba hihaino ny teniny sy hanao zavatra mifanaraka amin’izany: “Raha mitandrina ny teniko hianareo, dia ho mpianatro tokoa ka hahalala ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo”. Izany no fanalahidin’ny fahafahana amin’ny fitiavany.
by Robert Klynsmith